तिथि मेरो पत्रु » तपाईं डेटिङ गरूँ किन कसैले तपाईंको प्रकार छैन हुनुहुन्छ
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 26 2020 |2मिनेट पढ्न
आजसम्म ती पटक जहाँ आफ्नो साथी वा परिवारका थियो, तिनीहरूले थाह कसैसित मिति मा तपाईं स्थापित गर्न उत्सुक, तपाईं लागि जाने व्यक्ति कस्तो प्रकारको सोध्न?
लगभग हरेक दोषी छ तिनीहरूले प्रकार वा साथी को प्राथमिकता को कुनै प्रकारको छ कि यो-दाबी.
म मान्छे यसबारे सबै समय कुरा सुन्न: "म कलात्मक-प्रकार मान्छे म एक कलाकार हुँ मात्र मिति" वा "म समान क्यारियर क्षेत्रहरु मा मिति मान्छे रुचाउँछु।"
तर तपाईं एक ठूलो पकड बेवास्ताले छन् भने तिनीहरूले आफ्नो "आदर्श प्रकार" फिट छैन किनभने के?
यो एकदम अक्सर हुन सक्छ, विशेष गरी अनलाइन डेटिङ. तपाईं आफ्नो आँखा पकडता एक प्रोफाइल भर आउन, उहाँले आफ्नो आदर्श जोडीलाई सूचीबारे फिट गर्दैन किनभने तर आफ्नो तथ्याङ्क पढेपछि तपाईं चाँडै मा कदम. त्यसैले आफ्नो प्रकार अग्लो छ, पेशी मानिसहरू तर आफ्नो प्रोफाइल त्यो केवल 5'6 छ "र मात्र संयम व्यायाम चासो वा आफ्नो प्रकार गोरा छ भन्छन्, पूर्वी युरोपेली महिला र त्यो एक श्यामला Australian छ. तिनीहरूले तुरुन्तै एक खेलमा देखिने छैन किनभने स्वतः कसैले लेखन नगर्नुहोस्.
तपाईंले किन व्यक्ति को एक विशेष प्रकार केटासित आवश्यकता महसुस गर्छन्?
तपाईं पनि यस्तै गतिविधिमा आधारित कसैसित सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ, विश्वास र लक्ष्य. तपाईं विशिष्ट दिशानिर्देश फिट कसैले गर्नेबारे पनि धेरै ध्यान भने तपाईं डेटिङ गर्दा पालन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईं संभवतः एक ठूलो सम्बन्ध निर्माण मा आफ्नो संभावना sabotaging हुन सक्छ.
तपाईं केवल आफैलाई आफ्नो प्रकार केटासित गर्न अनुमति जब, तपाईं बस पुराना पैटर्न दोहरो हुन सक्छ. तपाईं पछिल्लो दस वर्ष को लागि व्यक्ति को नै प्रकार दिनांक र गर्नुभएको हो भने सम्बन्ध को कुनै बाहिर काम गरेको छ, सायद तपाईं आफ्नो रुचि प्रकार डेटिङ बस विशेष पुनर्विचार गर्नुपर्छ. तपाईं मा र अधिक व्यक्ति को नै प्रकार केटासित जब, सम्बन्ध सामान्यतया नै अन्त परिणाम छ.
एक विशेष प्रकार डेटिंग सहज र पूर्वानुमान बन्न सक्छ. आफ्नो प्रकार छ जो डेटिंग कसैले, विभिन्न कसैले, तपाईं नयाँ कुराहरू प्रयास र नयाँ जीवन अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर अनुमति दिन सक्छ. तपाईं आफैलाई भन्दा फरक सोख छ जो कसैले डेटिङ प्रयास भने, के तपाईं साँच्चै आनन्द उठाउन सक्ने नयाँ गतिविधिहरु प्रयास गर्न सक्षम छन्. आफ्नो भन्दा फरक सम्पदाको देखि कसैसित भेटघाट तपाईं नयाँ खाद्य पदार्थ र संस्कृति अनुभव गर्न अनुमति दिन सक्छ.
स्पष्ट हुन, म के तपाईं अधिक यस्तै आन्तरिक कोर मूल्यमान्यता भएका मानिसहरू डेटिङ प्रयास सुझाव छु (यस्तो भरोसायोग्य रूपमा, विश्वासयोग्य वा उदारता), बाह्य आधारित अरूलाई छान्ने विरोध रूपमा (यस्तो उपस्थिति रूपमा, जातीयता वा सामाजिक स्थिति). तपाईं पनि यस्तै कोर मूल्यमान्यता भएका पछ्याइरहेका साझेदार अडिग रहन गर्नुपर्छ. तपाईं एक परिवार संग केहि वर्ष मा बसोबास गर्न चाहनुहुन्छ भने, कुनै महत्वाकांक्षा छ जो मानिसहरू एक परिवार शुरू गर्न डेटिङ सुरु छैन. तथापि, तपाईं शारीरिक साथी को आफ्नो आदर्श प्रकार फिट नहुन सक्छ व्यक्तिहरू भेट्टाउन भने, तर तपाईं दीर्घकालीन लक्ष्य र विश्वास साझा, शायद तपाईं उनलाई एक मौका दिनु पर्छ.
आखिर, तपाईं बस आफ्नो सिद्ध म्याच हुन सक्छ थाह कहिल्यै.